Anti-military Dictatorship in Myanmar 0983
Uploaded by thakhinRIT
AUNG SAN SUU KYI,MYANMAR, BURMA, GENERAL AUNG SAN, GENERAL NE WIN, SENIOR GENERAL SAW MAUNG, SENIOR GENERAL THAN SHWE, GENERAL THEIN SEIN, GENERAL TIN OO, NLD, HUMANRIGHTS IN MYANMAR/BURMA, MILITARY DICTORSHIP IN MYANMAR/BURMA, CEASEFIRE AND PEACE IN MYANMAR/BURMA, YANGON, RANGOON, MANDALAY, SHAN, UWSA WA, KACHIN, CHINA-MYANMAR RELATIONS, INDIA-MYANMAR RELATIONS, THAILAND-MYANMAR RELATIONS, BANGALADESH-MYANMAR RELATIONS, HISTORY OF BURMA, HISTORY OF MYANMAR, HISTORY OF SOUTH EAST ASIA, RANGOON, YANGON, MANDALAY, NAYPYITAW, BAGAN, အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ မြန်မာ ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် တိုက်ဖျက်ရေး ၊ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ၊ CIVIL WAR IN MYANMAR/BURMA, အယ်ဒီတာ - သခင်ဝါစက ( ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ),
ကချင် မူးယစ်နှိမ်နင်းရေး လူမှုအဖဲ့ေ
ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးဖို့ ချီတက်လာသူပြည်သူများအား စစ်တပ်က
တားမြစ်ထားစဉ်။ သတင်းဓာတ်ပ-ုံ (Photo Credit to Kachin
News) မသိင်္ဂီထိုက် 18.02.2016 20:35 VOA
ဘိန်းခင်း တွေကို ဖျက်ဆီးဖို့ ချီတက်လာကြတဲ့ လူဦးရေ ၂ ထောင်ကျော်ကို ကချင်ပြည်နယ်
၀ိုင်းမော်မြို့နဲ့ ၁၂ မိုင်အကွာ လမ်းမပေါ်မှာ မြန်မာ့ တပ်မတော်က ပိတ်ဆို့ တားဆီးထားတာ
ဒီကနေ့ ၃ ရက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိန်းစိုက်တောင် သူတွေနဲ့ ဘိန်းခင်း ဖျက်မယ့်
ဒေသခံေ တွကြား ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်မယ့် အရေးကြောင့် အာဏာပိုင်တွေက တားဆီးထားတာလို့
ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no.0983
သမ္မတဦးသိန်း စိန်အစိုး ရနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တ့က
ို ဘိန်းခင်း များကိုဖျက်ခွင့်မပြု
0983 သမ္မတဦးသိန်း စိန်အစိုး ရနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တ့ကို ဘိန်းခင်း များကိုဖျက်ခွင့်မပြု2.The Fight For Freedom in Burma အကြောင်းပြသလို ဘိန်းခင်း ဖျက်ဖို့ ချီတက်လာတဲ့ ကချင်ရပ်မိရပ်ဖတွေ ဒေသခံတွေနဲ့ ဦးဆောင်ဖ့စွဲ ည်းထားတဲ့ ကချင်ပြည်သူ့ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး အဖွ့ကဲလည်း ခွငြ့် ပုချက် ရတဲ့ အထိ စောင့်ဆိုင်းမယ်လို့ ပြောဆိုထားပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင်း လူငယ်တွေ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲမှု ပြဿနာ ကြီးထွားလာတာနဲ့ ဘိန်းခင်း တွေကို စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးလာကြတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ယူဆတာကြောင့် ဒီနှစ်မှာ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အရပ်သားတွေ စုပေါင်းပြီး ဘိန်းခင်းတွေ ဖျက်ဆီးဖို့ လှုပ်ရှားလာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်န ယ် ၀ိုင်းမော်မြို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမတ် ဦးနော်လီ ခေါ် ဇခေါင်ခမ်းရယ် ကို မသိင်္ဂီထိုက် ဆက်သွယ်မေးမြန်း တာမှာတော့ လက်ရှိ အခြေအနေကို အခုလို စပြီး ပြောဆိုခ့ပဲါတယ်။ ဦးနော်လီ။ ။ တားထားတဲ့ အခြေအနေတော့ ရှိတော့ ရှိသေးတယ်။ ၀ါရှောင် အထွက် လမ်းခွဲနားမှာပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ သိထားတာကတော့ တဘက်နဲ့ တဘက်၊ တဘက်မှာက ဘိန်းပင်တွေကို စိုက်တဲ့ တောင်သူတွေလို့ ပြောရမလား၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေလို့ ပြောရမလား၊ ဒေသခံေ တွက အန္တရာယ် ပြုမယ်ဆိုတ့ဟဲာကို ဒီက အစိုးရက ကျတော့ လုံခြုံရေး အနေနဲ့ သူတို့ ဆောင်ရွက် မပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိလို့ အဲသလို တားထားတယ်လို့ လောလောဆယ်တော့ အဲလို သဘောပေါက်ထားတယ်။ မသိင်္ဂီထိုက်။ ။ အဲဒီတော့ ဘိန်းခင်းတွေကို ဖျက်နေပြီလား။ ဘယ်နား မှာ ရောက်နေကြပါလဲ။ ဦးနော်လီ။ ။ ပထမ တသုတ် လူ ၁၀၀၀ တက်သွား ခဲ့ပြီး ပြန်လာခဲ့ပြီ။ အခု လူအင်အား မလောက်လို့ ဘိန်းခင်းကလည်း များတဲ့ အခါကျတော့ လူအင်အား ၂၀၀၀ ကျော်ပေါ့နော်။ လူအင်အား ပြန်လာစုပြီးတော့ ဒုတိယ အကြိမ် ပြန်တက်ဖို့ လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ အခုအချိန်ထိ မထွက်နိုင်သေးဘူးပေါ့။ အဲဒီ အခြေအနေ ရှိနေပါတယ်။ မသိင်္ဂီထိုက်။ ။ ၀ိုင်းမော် အထွက်မှာလားရှင်။ ဦးနော်လီ။ ။ ၀ိုင်းမော်အထွက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ၀ိုင်းမော်ကနေ ၁၂ မိုင်လောက် ရှိမယ် ထင်တယ်။ ၀ါရှောင် အထွက်ေ ပါ့။ ၀ိုင်းမော်ကနေ အသွားမှာ ၀ါရှောင်ဆည် ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီ ရွာအထွက် ချီဖွေလမ်းခွဲ၊ ချီဖွေကို သွားတဲ့ လမ်းနဲ့ ကန်ပိုက်တီကို သွားတဲ့ လမ်းခွဲ ထိပ်မှာ ဟုတ်တယ်။ မသိင်္ဂီထိုက်။ ။ ပိတ်ဆ့ခိုံထားရတာ စိုးရိမ်စရာများ ရှိပါသလားရှင့်။ ဦးနော်လီ။ ။ အဲလိုမျိုး တိုင်ပ င်ညှိနှုငိ်းနေတာတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ စိုးရိမ်စရာ အန္တရာယ် ရှိတာ အဲသလိုတော့ မရှိပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဒေသခံတွေလည်း မသွားခိုင်းရင်လည်း သွားခွင့်ပြုတဲ့ အထိ စောင့်နေမယ်ပေါ့ အဲဒီသဘော။ ဒီက အာဏာပိုင်တွေကလည်း လုံခြုံရေး အခြေအနေ အရပေါ့နော် ဘယ်လို ပြန်ဖြစ် မလာမလဲ ဆိုတာကတော့ မသိသေးဘူးပေါ့နော်။ ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no. စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး လက်စွဲ LEAD THE FIGHT .ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&.
The Fight For Freedom in Burma မသိင်္ဂီထိုက်။ ။ အခု တားထားတာက စစ်တပ်က တားထားတာလား၊ ရဲက တား ထားတာလား။ ဘယ်သူေ တွက တားထားတာလဲ။ ဦးနော်လီ။ ။ ဂိတ် ကတော့ စစ်တပ် ဂိတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လာရောက် ညှိနှိုင်းတာကတော့ ရဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖ့ကွဲ လာရောက် ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ မသိင်္ဂီထိုက်။ ။ ဘိန်းခင်း ဖျက်တာကိုတော့ ဒီနှစ်မှ စလုပ်တာလား။ ရပ်မိ ရပ်ဖတွေ ရပ်ရွာက စုပြီး လုပ်ကြတယ်လို့ ကျမတို့ ကြားထားလိ့ပုါ။ ဒီနှစ်မှ စလုပ်တာလား။ နှစ်စဉ်ဘဲ လုပ်နေကြလားရှင့်။ ဦးနော်လီ။ ။ ခါတိုင်းနှစ်ကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန ဆိုင်ရာကပေါ့နော် လုပ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ ပြည်သူလူထု ပါဝင်လာတဲ့ အပိုင်း တွေ့ရတယ်။ ခါတိုင်းနှစ်က ပြည်သူ လူထု အခုလို ပါဝင်တာ မရှိဘူး ဒီနှစ်မှစတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မသိင်္ဂီထိုက်။ ။ ဟုတ်က့ရှဲင့်။ ပြည်သူလူထုကပါ ဒီမူးယစ်ဆေးကို ဘိန်းခင်းပေါ့နော်။ ဘိန်းခင်းကို ဖျက်မယ်ဆိုပြီး အင်တိုက် အားတိုက် ဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ကချင်ပြည်နယ်တွင်းက မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာက စိုးရိမ်ရတဲ့ အနေအထား ရှိနေလိ့လုား။ ဘာကြောင့် ပြည်သူလူထုက ထွက်ပြီး ဘိန်းခင်း ဖျက်မယ်ဆိုတဲ့ အဆင့် ဖြစ်လာရတာပါလဲ။ ဦးနော်လီ။ ။ အဲဒါက ကျနော့် အမြင်က ၂ ချက် ရှိပါတယ်။ ၁ ချက်က တကယ့်ကို ဒေသခံ ပြည်သူလူထုက ဆိုးဆိုးရွားရွားကိုပေါ့နော် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲလာတာကို တွေ့နေရတယ်။ အဲဒါကျတော့ ဒီပြည်သူ လူထုကနေ အသင်းတော်တွေကနေ ခရစ်ယာန် အသင်းတော်တွေကနေ စုပေါင်းပြီးတော့မှ ပြည်သူလူထုတွေ ဒီ မူးယစ်ဆေးဝါးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေပေါ့နော် ပျက်ဆီးသွားတာတွေက ပိုပြီးမှ ဆိုးရွားလာတာကို တွေ့တဲ့ အခါကျတော့ ဒီ အသင်းတော်က ဦးဆောင်တာ တွေ့ရတယ်။ နောက် ဒုတိယ တချက်ကတော့ ဒီဘိန်းခင်း စိုက်တယ်ဆိုတာ တကယ်တန်းကျတော့ စပါးတို့ ပြောင်းတို့ ဘာတို့ စိုက်လို့ မရတဲ့ ဒေသမှာ နေထိုင်တဲ့ ဒေသခံတွေ အရင်တုန်းကတော့ ရှေးရိုးရာ အလိုက် နည်းနည်းပါးပါး ဆေးဖြစ် ၀ါးဖြစ် စိုက်ကြတာ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု နောက်ပိုင်းကျတော့ တဘက် နိုင်ငံကနေ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ ပုံစံ လာရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့ အခါကျတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွင်းမှာ လာရောက် လုပ်ကိုင်တဲ့ အခါကျတော့ အဲလိုမျိုးတွေပေါ့။ တကယ်တမ်း ကျတော့ ဒေသခံတွေရဲ့ နာမည်ယူပြီးတော့ တဘက် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာတဲ့ လူတွေက ပိုပြီးမှ ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ အဲဒီ အမြင် ၂ ဘက်နဲ့ ဒီဟာကို မလုပ်မဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး ပြည်သူလူထုက ၀ိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင် ပါဝင်လာကြတဲ့ သဘောရှိတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမတ် ဦးနော်လီ ခေါ် ဇခေါင်ခမ်းရယ်ကို မသိင်္ဂီထိုက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no.ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&.0983 သမ္မတဦးသိန်း စိန်အစိုး ရနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တ့ကို ဘိန်းခင်း များကိုဖျက်ခွင့်မပြု3. စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး လက်စွဲ LEAD THE FIGHT .
စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး လက်စွဲ LEAD THE FIGHT .2.0983 သမ္မတဦးသိန်း စိန်အစိုး ရနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တ့ကို ဘိန်းခင်း များကိုဖျက်ခွင့်မပြု4.ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&.The Fight For Freedom in Burma Jade Land Kachin 20.2016 နောက်ထပ်နှစ်ရက်ခွင့်ပြုမိန့မ်ရသော်လည်း ပတ်ဂျဆန်အဖွဲ့ ဘိန်းခင်းများသွားရောက်ဖျက်ဆီးမည် လူမှုအခြေပြုမူးယစ်တိုက်ဖျက်ေ ရးအဖွ့အဲနေဖြင့် ယခုစခန်းချထားသည့် နေရာတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ရက်နေ့ထိေ စာင့်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ပြီး ထိုရက်ကျော်လွန်ပါက ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no.
20.2... ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no.. မအလ စစ်တပ်န့ေဲဖာက်ပြန်ရေးတိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်တွေက အကာအကွယ်ပေးတယ်.2016 ဗမာပြည်ထဲ ဘိန်းလာစိုက်တယ်.0983 သမ္မတဦးသိန်း စိန်အစိုး ရနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တ့ကို ဘိန်းခင်း များကိုဖျက်ခွင့်မပြု5..The Fight For Freedom in Burma သက်ဆိုင်ရာမှခွင့်ပြုချက်မပေးသော်လည်း မူလစီစဉ်ထားသည့် ဆဒုံး၊ ကန်ပိုင်တီ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဘိန်းခင်း များ ဖျက်ဆီးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဝိုင်းမော်မြို့မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးရန်ထက်ွခွာလာသည့် လူထုအခြေပြုမူးယစ် တိုက်ဖျက်ရေးအဖွ့အဲား ဆဒုံး၊ ချီဖွေလမ်းခွဲအရောက်တွင် အစိုးရတပ်မ တော်မှ လုံခြုံရေးကြောင့် တားဆီးလိုက်သည်။ ဘိန်းခင်း တိုက်ဖျက်ရေးအဖြွဲ့ ကား ပဋိပက္ခဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသဖြင့် လုံခြုံရေးအရ တားဆီးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ အစိုးရတပ်မတော်မှ တာဝန်ကျအရာရှိတစ်ဦးက ပြောဆိုထားသည်။ ထိုသ့တိုားဆီးထားသည့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဆဒုံးလမ်းမတစ်လျှောက်တွင် စခန်းချနေထိုင်သည့် မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးအဖဲ့တွ့တွိုင် သောက်သုံးရေ နှင့် နေစရာအခက်အခဲကြုံတွေ့လာခဲ့သည်။ ဘိန်းခင်း ဖျက်ဆီးရန်အတွက် မူလတွင် လူထုအင်အား ၁၄၀၀ခန့်သာရှိသော်လည်း ယခုအချိန်တွင် ဖားကန့်၊ တနိုင်း၊ပူတာအို၊ရှမ်းပြည်နယ်မှ လူထုများလာရောက်ပူးပေါင်းသဖြင့် အင်အား ၃၀၀၀ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ( Kachin wave ) Kyaw Than shared La Raw's photo. စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး လက်စွဲ LEAD THE FIGHT . ဒါလားတရုတ်ရဲ့ ဘက်မလိုက် လေးစားရေး ဘန်ဒေါင်းမူ(၅)ချက်. နယ်ခံလူထုက တိုက်ဖျက်ေ တာ့ ဒုက္ခသည်စခန်းကိုဝင် နှောက်ယှက်ခြိမ်းခြောက်တယ်..ဒါလား မအလစစ်တပ်ရဲ့ အချုပ်အချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး သံဓိဌာန်.ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&.
2016 မှူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး ...2. စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး လက်စွဲ LEAD THE FIGHT . 20..0983 သမ္မတဦးသိန်း စိန်အစိုး ရနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တ့ကို ဘိန်းခင်း များကိုဖျက်ခွင့်မပြု6.The Fight For Freedom in Burma ဘိနိးခင်း စိုက်ပျိုးသော တရုပ်ပြည်ဘက်က သူဌေးများ ကချင် ဘက်ခြမ်းရှိ စစ်ပြေးစခန်းဖြစ်သော Shingchyai IDP camp သို့ လက်နက်များဖြင့်ဝင်ရောက်လာပြီး ချိန်းခြောက်ခြင်းစစ်ဆေးမေမြန်းခြင်း ဓားဖြင့်ရွယ်ခြင်းပြုလုပ်သည်သာမက စစ်ပြေးစခန်း ရှိအမျိုးသားတစ်ဦးကို pat jasan အဖွ့ဝဲင်ဟုပြောဆိုပြီး ဝိုင်းဝန်းရိုက်နက်ခဲ့သည့်အတွက် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိကာ မြစ်ကြီးနား သိ့ယုနေ့ရောက်ရှိလာပါတယ် ကန်ပိုင်တည်လမ်းခရီးသွားသူများကို မှတ်ပုံတင် စစ်ဆေးခြင်း မေးမြန်းခြင်းကားများရပ်တန့်စေခြင်းကို တရုပ်ဘိန်းကုန်သည်များပြုလုပ်နေပါကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ် Seng Jaw with Munglai Hka and 19 others.ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&...ဒိ့အုရေး မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ် ၏တားဆီးခံထားရသည့် ကချင်လူထအုခြေပြုမူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေး (Patjasan)အဖွဲ ၏ အဓိဌာန် နှင့် ကြွေးကျော်သံ ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no.
..0983 သမ္မတဦးသိန်း စိန်အစိုး ရနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တ့ကို ဘိန်းခင်း များကိုဖျက်ခွင့်မပြု7...........ဒိ့ရုန်သူ။ မှုးယစ်ဆေး ဝါး ကာကွယ် သူ. ဒိ့အုရေး။ မှုးယစ်ဆေး ဝါးထုတ်လုပ်သူ .....ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&..... စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး လက်စွဲ LEAD THE FIGHT .The Fight For Freedom in Burma "မှုးယစ်ဆေး ဝါးတိုက်ဖျက်ရေး................ဒိ့ရုန်သူ။" ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no.
THAILAND-MYANMAR RELATIONS. NLD. အယ်ဒီတာ . HUMANRIGHTS IN MYANMAR/BURMA. CHINA-MYANMAR RELATIONS. ဤစာတမ်းကို အင်တာနက်စာမျက်နှာ SCRIBD. SENIOR GENERAL SAW MAUNG.MYANMAR.ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&.သခင်ဝါစက ( ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ). HISTORY OF MYANMAR. BANGALADESH-MYANMAR RELATIONS. HISTORY OF SOUTH EAST ASIA. HISTORY OF BURMA. MILITARY DICTORSHIP IN MYANMAR/BURMA. GENERAL NE WIN. SENIOR GENERAL THAN SHWE. YANGON. SHAN. UWSA WA. စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး လက်စွဲ LEAD THE FIGHT . RANGOON. INDIA-MYANMAR RELATIONS. RANGOON. CEASEFIRE AND PEACE IN MYANMAR/BURMA. GENERAL TIN OO. BAGAN. NAYPYITAW. KACHIN.COM တွင်တင်ထားပါသည်။ ဤစာတမ်းကို စာရွက်ဆိုက် A5 ပေါ်တွင် ပုံနှိပ်ရန်သင့်တော်ပါသည်။ 2016 အယ်ဒီတာ . GENERAL THEIN SEIN. YANGON.TAG AUNG SAN SUU KYI.0983 သမ္မတဦးသိန်း စိန်အစိုး ရနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တ့ကို ဘိန်းခင်း များကိုဖျက်ခွင့်မပြု 8 . MANDALAY.The Fight For Freedom in Burma INDEX . MANDALAY. BURMA.သခင်ဝါစက ( ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ) ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no. GENERAL AUNG SAN. အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ မြန်မာ ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် တိုက်ဖျက်ရေး ၊ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွ့ချဲုပ် ၊ CIVIL WAR IN MYANMAR/BURMA.